Ukuphefumula Okubi | I-OptiSmile™ Advanced Dentistry
umoya omubi ekapa
umoya omubi kakhulu ungavusa abafileyo.
I-Halitosis ingaba yihlazo futhi kwezinye izimo ingadala nokukhathazeka. Akumangalisi ukuthi amashalofu ezitolo agcwala ushungamu, iminti, ukuwashwa ngomlomo neminye imikhiqizo eyenzelwe ukulwa nomlomo onukayo. Kepha eminingi yale mikhiqizo yizinyathelo zesikhashana nje ngoba azibheki imbangela yenkinga.
Ukudla okuthile, izimo zempilo nemikhuba kungezinye zezimbangela ze-halitosis. Ezimweni eziningi, ungathuthukisa inhlanzeko yakho yamazinyo ngemikhuba engaguquguquki ekubhekeni amazinyo nezinsini zakho. Uma izindlela ezilula zokuzinakekela zingaxazululi inkinga, bheka udokotela wamazinyo noma udokotela wakho ukuze uqiniseke ukuthi isimo esibi kakhulu asibangeli ukuphefumula kwakho okubi.
Singakusiza kanjani ukunuka komlomo
I-Halitosis kungaba ngesinye sezibonakaliso zokuqala zesifo sezinsini, ngoba lokhu kubangelwa nokwakheka kwamagciwane e-plaque eceleni komugqa wezinsini okungenzeka ukuthi ubangela ukuphefumula okubi. Uma ingasuswa uqweqwe lungadala ukopha nokuvuvukala kwezinsini, izimpawu ze-gingivitis. Ukushiywa kungalashwa, lokhu kungaholela ezifweni zezinsini ezimbi kakhulu.
Uma unokukhathazeka ngezinsini ezophayo noma uhlangabezana nalokhu ngqo bese ubhuka i-aphoyintimenti ne-OptiSmile ngokushesha.
Sala kahle Ukuphefumula Okubi
Ukuphefumula kabi kungaba namahloni futhi kungathinta impilo yakho yezenhlalo, yomuntu siqu neyomsebenzi. Imvamisa lokhu kuqhamuka ekugqokeni okusindayo ngemuva kolimi noma izingcezu zokudla ezinamathele phakathi kwamazinyo. Isifo sezinsini nezinsini ezophayo nakho kungadala ukuphefumula kabi
Ukungakhathazeki. Ngokuqondiswa Kwethu, Ungasho Ukuvalelisa Ukuphefumula Okubi!
1. Hlola izinsini zakho bese uhlonza imbangela yazo
2. Hlela ukuhlanzwa kwamazinyo ngokuphelele yi-Dental Hygienist yethu
3. Kweluleke ngezinto zokuxubha ezikhethekile, i-floss nolimi olususa ulimi